UK: Boqolaal ciidammo dheeraad ah ayaan u direynaa Soomaaliya - BBC News Somali
Theresa May: Boqolaal ciidammo dheeraad ah ayaan u direynaa Soomaaliya
Ra'iisul wasaaraha Britain, Theresa May ayaa sheegtay in dowladeeda ay ciidammo dheeraad ah u diri doonto Soomaaliya.
May, oo khudbadeedii ugu horraysay ka jeedisay shirweynaha Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay, waxay sheegtay in Britain ay tallaabadaasi uga gol leedahay dardar gelinta dagaalka la gula jiro xarakada Al-Shabaab.
Saraakisha Britain ayaa waxa ay sheegeen in boqolaalka ciidan ee dheeradka ah ee la qorsheynayo in loo diro Soomaaliya ay qeyb ka tahay gargaarkii dhinaca militariga, siyaasadda iyo bani'aadannimo ee Britain ay ballan qaaday.
"Anagoo adeegsanayno xubinta joogtada ah ee aan ku leenahay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, waxaan kaalin fir-fircoon ka qaadanay la dagaalanka kooxda Al-shabaab ee Soomaaliya." Theresa May ayaa sidaasi ka sheegtay xarunta Qaramada Midoobey ee New York.
May ayaa intaasi ku dartay, "Waxaa muhiim ah in aan taageerno waddamada gobolka ee kumannaanka kun ee ciidan ku biiriyay hawlgalka nabad ilaalinta. Waa in aan sii wadno kobcinta awoodda iyo tayada ciidanka Soomaaliya", ayay tiri Theresa May.
Image caption Ciidamada Britain ayaa ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomalida caawin doono
Waxay sidoo kale shaacisay in Britain ay qorshenayso in ay qabato shir caalami ah oo diirada lagu saari doono xaaladda soomaaliya sanadka soo socda ee 2017-ka.
Waxay intaasi ku dartay in Britain ay ku bixin doonto 20 milyan oo lacagta geniga ah taasi oo lagu maalgelin doono qorshaha dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan Kenya.
Shirka caalamiga ah ee ay ku baaqday Ra'iisal wasaaraha Britain Theresa May waxa uu noqonayaa shirkii labaad ee caalami ah oo Britain ay u qabato Soomaaliya tan iyo sanaddii 2012-kii.
Ra'iisul Wasaarihii ka horreeyay Theresa May ee xilka baneeyay dhowr bilood ka hor, David Cameron, ayaa 2012-kii London ku qabtay shirkii ugu horreeyey ee caalami ah oo Soomaaliya diiradda lagu saaray oo ay martigelisay Britain.